Waxaa saameeyay COVID-19, waxaa sii kordhaya baahida loo qabo alaabada bakteeriyada disha sida jeermiska iyo aalkolada. Laga bilaabo bilowga sanadka 2020, mashiinadeena waxay shaqeynayaan 24 saacadood maalin kasta suuq loogu talagalay sunta disha aalkolada iyo khamriga. Waxaan u soo direynaa in ka badan 100000 kumbiyuutarada kombiyuutarrada leh t ...
Kani waa badeecadeena cusub ee qaabeynta cusub. Boorsada ayaa laga sameeyay caag balaastik ah. Lakabka kore (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba baahida macmiilka ama sheyga. Lakabka gudaha (polyetylen) waa laastik ...
Marba marka ka dambaysa macaamiisheennu waxay bilaabayaan inay adeegsadaan sheer si ay u buuxiyaan alaabada dareeraha ah. Kadib, waa maxay farxad? Kani waa weel baakad cusub oo isku daraya dabacsanaanta Bacda Sanduuqa iyo faa'iidooyinka hagaagsan ee agabyada baakadaha adag ama kuwa adag, taas oo ka dhigaysa cheeratainer inay tahay meesha ugu fiican ...